Repuso: Ururi, maamul, oo daabac faallooyinkaaga macmiilka & aaladaha maragga | Martech Zone
Repuso: Ururi, maamul, oo daabac faallooyinkaaga macmiilka iyo aaladaha maragga
Waxaan caawinaa dhowr meherado maxali ah, oo ay ku jiraan qabatinka goobo badan iyo silsilad soo kabasho, silsilad dhakhtar ilkeed, iyo dhawr ganacsi oo adeegyada guriga ah. Markii aanu fuulnay macaamiishaas, run ahaantii aad baan uga naxay, tirada shirkadaha wadaniga ah ee aan haysan si ay wax u dalbadaan, u ururiyaan, u maamulaan, uga jawaabaan, una daabacaan markhaatifurka iyo dib u eegista macaamiishooda.
Waxaan u sheegi doonaa tan si aan mugdi ku jirin… haddii dadku ay ka helaan meheraddaada (macaamiisha ama B2B) iyadoo lagu salaynayo goobtaada juqraafiyeed, maalgashiga madal maamulka dib u eegis waxa aad uga badin doona ganacsiga uu keeno! Waa maxay tusaalooyinka tan? Raadinta sida soo socota:
Qandaraaslaha saqafka ee Carmel, IN
Koronto yaqaanka Crawfordsville
Medicaid dentist ee carruurta ii dhow
Indianapolis Salesforce Consultants
Baadhitaanadan juqraafiyeed waxay dhamaantood keeni doonaan khariidad khariidad ah oo lagu soo bandhigay bogga natiijooyinka raadinta.
Waa maxay Xidhmada Maab?
Marka macaamiisha ama ganacsiyada ay raadinayaan kheyraadka maxalliga ah, waxay la kulmaan bogga natiijooyinka mashiinka raadinta (SERP) taas oo ay u badan tahay xirmada khariidada. Xidhmada khariidadda waa gobol SERP ka mid ah oo taxaya meheradaha kugu xeeran oo ku qiimeeya khusayntooda, inta jeer ee dib u eegista, dib u eegista cusub, iyo qiimayntooda.
Xidhmada khariidada waa ma ay saamaysay hagaajinta mashiinka raadinta ee goobtaada (SEO), istaraatiijiyada macluumaadkaaga, istaraatiijiyadaada bulsho, ama istaraatiijiyada xayaysiintaada. Xidhmada khariidadda waxa gabi ahaanba gacanta ku haya liis ganacsi oo sax ah iyo qiimayn joogto ah oo wanaagsan!
Markaa, haddii aad tahay meherad maxalli ah oo lataliyahaaga suuqgeynta ama wakaaladu aanay fulin maaraynta dib u eegista… waxay ku samaynayaan khasaare.
Waa maxay Maareynta Dib-u-eegista?
Goobaha maamulka ee dib u eegista ayaa ku siinaya dhammaan adeegyada lagama maarmaanka u ah inaad:
Ururi faallooyin - Ka soo ururi faallooyinka macaamiisha hadda adigoo u soo diraya xiriirka dib u eegista email ahaan ama qoraal ka dib marka mashruuca ama adeegga la dhammeeyo.
Ururi faallooyinka hore – Ka soo ururi faallooyinka macaamiishii hore ee aan soo gudbin dib u eegis. Codsiyadan si isdaba joog ah ayaa loo khiyaameeyaa si aad u sii wado ururinta dib u eegista si joogto ah halkii aad ka ahaan lahayd hal olole oo weyn (kaas oo u muuqda mid aan dabiici ahayn mashiinka raadinta).
La wadaag faallooyinka - Marka dib u eegis weyn oo bilow ah la qoro, ku dhiirigeli macmiilka inuu la wadaago dib u eegista dhammaan goobaha warbaahinta bulshada.
Dib u eeg digniinaha - Ogeysii kooxdaada gudaha dib u eegista la gudbiyay oo u dariiq jawaabta ku habboon. Haddii ay xun tahay, waxaad la xiriiri kartaa si aad isugu daydo oo aad u xalliso arrinta. Haddii ay togan tahay, waxaad u mahadcelin kartaa qofka wakhtiga aad ku bixisay.
Cadaynta bulshada – Marka qof wax iibsan kara uu soo booqdo mareegahaaga, way raadinayaan caddayn in shirkaddaada lagu aamini karo. Haysashada widgets ama bogga dib u eegista ee goobtaada waxay dhiirigelin kartaa iibsadaha suurtagalka ah inuu gaaro. La'aanteed caddayn bulsho, iibsadayaashu caadi ahaan ma dhibaan. Mareegta maareynta dib u eegista weyn waxay ku siinaysaa faashado iyo soo-bandhigyo aad ku yeelan karto boggaaga oo dhan si aad u caddeyso in ganacsigaagu uu qabanayo shaqo fiican.
Dulmarka Maareynta Maareynta Dib-u-eegista
Repuso waa madal maamulka dib u eegista oo leh dhamaan sifooyinka muhiimka ah iyo shaqaynta ganacsigaagu u baahan yahay si uu u ururiyo, u maareeyo, una daabaco faallooyinkaaga:
Ururi - Repuso la socda dhammaan kanaaladaada warbaahinta bulshada si ay macaamiishaadu u eegaan. Dib u eegista sidoo kale waxaa lagu soo aruurin karaa widgets goobta Repuso.
Abaabul – Dooro dib u eegista aad jeceshahay gudaha Repuso dashboard-ka si loogu muujiyo widgets-yada. Hel ogeysiis oo tan ku samee wakhtiga dhabta ah adoo isticmaalaya abka Repuso!
Carwada - Kordhi beddelka degelkaaga adiga oo tusinaya faallooyinka la doortay Repusowidget sabbaynaya ama khadka tooska ah ee boggaga ugu muhiimsan.
Aaladaha dib u eegista markhaatiga macmiilka waxa ka mid ah dib u eegisyada liiska, sumadaha sabbaynaya, slider, flash, widget sabaynaya, shabkad dib u eegis, dib u eegis layn, sawiro dulmar ah, iyo in ka badan.
Repuso waxay la midaysaa oo la socotaa dhammaan warbaahinta bulshada ee waaweyn iyo dib u eegista aaladaha, oo ay ku jiraan Facebook, Twitter, Instagram, Zendesk, iTunes, Google Play, Delighted, Google Business, GetApp, Capterra, G2, Thumbtack, Trustpilot, Tripadvisor, Bogagga Jaallaha ah, Airbnb, Healthgrades, Vrbo, Booking.com, GetYourGuide, Expedia, Zillow, Houzz, HomeAdvisor, Angi, BBB, OpenTable, iyo Realtor.com.
Abuur Account Repuso
Afeef: Waxaan u ahay xubin Repuso waxaanan ku xidhayaa macaamiil badan, oo ay ku jirto shirkaddayda, maqaalkan.
Tags: Airbnbangieliiska cadhadabbbBooking.comcalooshaururi dib u eegistaku faraxsanexpediaFacebookg2getapphagahaagagoogleganacsiga googlegoogle playdarajooyinka caafimaadkalataliye gurihoozzInstagramiTunesraadinta maxalliga ahmaxalliga ahmaamul dib u eegistaxirmada khariidadaOpenTableabaabulo dib u eegistawidget ratingsganacsaderealtor.comdib u dhacmaaraynta dib u eegistamadal maamulka dib u eegisdib u eegis widgetSEOserpdib u eegista bandhigwidget markhaati ahsuulkaTripadvisoraaminaadTwittervrbobogagga hurdiga ahYelpzendeskzillow
Douglas Karr Friday, May 20, 2022 Friday, May 20, 2022
Kacsi: Tiknoolajiyada Suuqgeynta Iskaashatada ee Suuqgeeyayaasha Maxaliga iyo Qaranka-ilaa-Maxali ah
Gorgias: Cabbir Saamaynta Dakhliga Adeegga Macmiilka Ecommercega